Iwayini Elitholakalayo 2.0 | Kusuka kuLinux
Ezinyangeni ezintathu nje ezedlule sakutshela ngakho Ukukhishwa kwewayini version 1.9.23, ngokusekelwa kwe- Imfihlakalo V: Ukuphela Kweminyaka; kanjalo, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kukhishwe inguqulo yeWine 2.0, siletha nentuthuko enkulu ebusweni, ngokunembile, ukusekelwa kwemidlalo yevidiyo nezinye izinhlelo zokusebenza ezinjengeFotohop noma iMicrosoft Office 2013.
Iwayini wuhlelo olwenzelwe i- ukufaka ukusabalalisa kwethu kwe-Linux lezo zinhlelo zokusebenza esizithola ku-Windows kuphela. Ngokubanzi, okwenziwa yiwayini vumela izinhlelo ezenzelwe i-MS-DOS ukuthi zisebenze nangezinhlobo ezahlukahlukene zohlelo lwamawindi we-hegemonic. Eqinisweni, ngokudidayo, uWine wazalwa enguye I-Windows Emulator, ukuze kamuva kube yisifinyezo esiphindaphindwayo se- Iwayini aliyona i-Emulator, kodwa "umabi wefa".
Sekudlule unyaka selokhu kwethulwa okukhulu kokugcina futhi, ngenxa yalesi sizathu, iwayini lifika nenqwaba yezinto ezintsha. Ku- isimemezelo esisemthethweni basho ukuthi badlule ukuthuthuka okungu-6.600, kepha okusishayayo lapho uthi shazi ukusekelwa okungama-64-bit kwe-macOS nenjini ye-Mono, ukuxhaswa kwe-GStreamer 1.0 ne-Direct3D, i-interface entsha yomsebenzisi noma ikhulisa ukukala kwizibonisi ze-HiDPI.
Okunye ukunqoba kwabezindaba kwale nguqulo entsha yewayini nakanjani wethula iMicrosoft Office 2013 kwiLinux. Kepha, yize lokhu kungenye yezinto ezintsha ezivelele ngenxa yobukhulu bephakheji yeHhovisi, okwamanje, abasebenzisi abajwayele ukuphendukela ewayinini ngalezi zinhloso. Labo abasebenzisa Ubuntu, iMint noma yikuphi okunye ukusatshalaliswa kweLinux ngokuvamile bafaka iwayini ukuze bakwazi ukudlala imidlalo noma izinhlelo ezingasebenzi kuhlelo lwabo lokusebenza. Ngokwesitatimende esivela kubadali bayo, Umsebenzi okhethekile wenziwe "ekusekelweni kwezicelo eziningi nemidlalo".
Inguqulo ye-2.0 ihlanganisa futhi Izici ze-DirectX ebesingaziboni ku-Linux kuze kube usuku. Lokhu kusho ukuthi yenaIzinhlelo nemidlalo yeMultimedia ekugcineni izosebenza kangcono noma bengenayo inguqulo yendabuko yeLinux. Lokhu kunjalo ngezinhlelo zokuhlela njenge-Photoshop, manje ezosebenza ngokushesha okukhulu; noma imidlalo efana neDoom 2016, ekhombise ukusebenza okumangazayo kuWine 2.0.
Ukuze ukwazi ukujabulela lesi sibuyekezo esisha kusuka ekusatshalalisweni kwe-Linux oyithandayo, vele ulande ama-binaries afanele lapha bese ulandela imiyalo ehambisanayo.
Le nguqulo entsha ye I-Wine 2.0, isisiza ukuthi siqhubeke nokuqinisa izizathu zabasebenzisi abaningi ukuqeda ukufudukela eLinux. Sekuyiminyaka, uhlelo lwethu lokusebenza esiluthandayo lukhombisa ukuthi lusebenza kahle kakhulu, sikhohliwe ngamagciwane, sesivele sijabulela uhla oluhle lokusatshalaliswa kwamahhala kukho konke ukunambitheka nezidingo futhi sinazo zonke izinhlelo zokusebenzisa eziyisisekelo ... futhi nezinhlelo zokusebenza okufana neWine 2.0, uhla lwezicelo esingaluthokozela lukhula kakhulu.Yini enye ongayicela ohlelweni lokusebenza lwamahhala ngokugqwesa?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Wine 2.0 etholakalayo
Iqiniso ukuthi nginezinhlelo ezi-2 zokusebenza kwazise emawindini ngingadlala imidlalo yamanje kakhulu njenge-naruto storm 4 futhi ngidlale ne-mmorpg engiyithanda kakhulu (i-Aurakingdom) yize uma i-aurakingdom ingasebenza ewayinini bengizoshiya amawindi yize ayikwazi ukudlala i-naruto
Ukuphela kwento engidinga ukuthi ngiqale iWindows ukuthi ngisebenzise i-MS Office emsebenzini, empeleni ngikhona manje. Ngifake i-Wine 2.0 futhi isifaki se-MS Office 2013 PLUS asisebenzi, siyakhiya sithi: IMicrosoft Office Professional Plus 2013 ihlangabezane nephutha ngesikhathi sokufakwa.
USergio A Guzman kusho
Kulokhu kungakuhle ukufaka iHhovisi nge-Play on Linux, isebenzisa injini yeWayini futhi yenza ngezifiso kakhulu kuneWayini esefomini eluhlaza.
Endabeni yami ngineHhovisi 2010 ku-Ubuntu 16.04 elisebenza kahle.
Phendula uSergio A Guzmán
IMicrosoft Access iyithuluzi elisetshenziswa kabanzi kwezamabhizinisi, futhi uKexi noma uBase abasondeli emandleni alo. Akukho okunye ongakwenza ngaphandle kokufaka iMicrosoft Office kolunye ukwahlukanisa, ngoba zonke izinhlobo zeMicrosoft Office ezingafakwa ngeWine ngePlayOnLinux zinezinkinga zokungafinyeleli. I-Cachis.
Imininingwane eminingi engiyenza ku-Base noma i-MySQL, kepha kunezikhathi lapho kufanele ngenze imininingwane yolwazi yezinkampani ezingibuzayo, futhi angikwazi ukubacela ukuthi bafake iLibreOffice lapho sebekhokhele engcono (iHhovisi 2007, ngokwesibonelo, inamathuluzi asheshisa kakhulu ukwenziwa kwamafomu). Okuhle ngeLibreOffice ukuthi isebenzisa i-BASIC esikhundleni se-Visual Basic ...
Ngiyethemba ukuthi ngingafaka i-Office 2007 nge-Access yalezi zinhlobo zemisebenzi. (Yize umshini obonakalayo one-WinXP ne-Office 2007 ungathathi i-RAM eningi, nge-512 MB kunokuningi). Halala!
I-PS: Okungaba wusizo kimi ukuthola imanuwali enhle ethuthukile yeLibreOffice Base (advanced: efundisa ukuthi ungayenza kanjani imibuzo eyinkimbinkimbi, amafomu ngezihlungi, ukwenziwa kwezinkinobho ezinokusebenza okwengeziwe nakho konke okunongwe ngeBASIC).
U-Enrique Castañeda kusho
Ngikwazi ukufaka i-office 2013 from play on linux with wine 2.0 stagingen Debian stretch but when starting it gives me a error; Kubukeka sengathi amanye ama-dll alahlekile ekucushweni kepha angazi ukuthi ayini.
Phendula u-Enrique Castañeda